Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan dayax gacmeedka GOES | Saadaasha Shabakadda
Waxaad u badan tahay inaad ka maqashay dayax gacmeedyada kormeerka hawada ee telefishanka. Waa aalado leh tiknoolojiyad horumarkeedu aad u sarreeyo oo awood u leh inay na siiyaan macluumaad weyn oo ku saabsan waxa koonkan ka jira iyo waxa ka dhacaya meeraheenna. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa dayax gacmeedka GUUL. Dayax gacmeedkan ayaa inaga caawinaya saadaalinta hawada. Waana saadaalinta cimiladu inay tahay wax aad u adag. Ma ahan wax la aqoonsan karo ama in algorithms qaarkood ay ku shaqeyso. Sababtaas awgeed, waxaa la ogyahay in marar badan "cimiladu ku guul darreysato."
Qormadan, waxaan ku tusi doonnaa sababta GOES uu u yahay dayax gacmeedka ugu wanaagsan ee saadaasha hawada oo la galiyay wareegga waqtiga oo dhan.
1 Waxaad ubaahantahay inaad saadaaliso cimilada
2 Waa maxay GOES?
3 Tayo fiican iyo qaladaad saadaalin yar
4 U fiirsashada goobta
Waxaad ubaahantahay inaad saadaaliso cimilada
Saadaalinta cimiladu waa wax aan u baahanahay si aan u fulino howlaheena ama aan u jadwalno dhacdooyinka qaarkood. Waxay kuxirantahay xaalada cimilada, dhacdooyinka qaarkood waa la sameeyaa ama lama sameeyo. Sidaa darteed, ogaanshaha saadaasha hawadu waa muhiim. Si kastaba ha noqotee, Ma aha hawl fudud. Waa mid aad u adag maxaa yeelay doorsoomayaasha cimilada si isdaba joog ah ayey isu beddeli karaan saacado gudahood. In kastoo maanta ay badan yihiin barnaamijyada roobka waana ogaan karnaa haddii berri roob ka di'i doono deegaankeenna, xogtaan badanaa way fashilmi karaan.
Waana in kastoo saadaasha hawadu mararka qaar dhacdo, haddana waa iska caadi. Waqtiga waxaa la ogyahay inay saameynayaan doorsoomayaal badan iyo cimilada. Si loola socdo waxa ka dhacaya jawigeenna, waxaan leenahay sheeko kale oo dayax gacmeedyada saadaasha hawada. Dayax gacmeedyadan ayaa daryeela awooda ogow nidaamyada jawiga ee jira waqti kasta oo aad awood u yeelan karto inaad saadaaliso isbeddelladooda.
Dayax gacmeedka 'GOES' ayaa loo furay si uu awood ugu yeesho inuu saadaaliyo cimilada si sax ah oo sax ah. Ma aha oo kaliya inay bixiso taas, waxay bixisaa wax intaa ka sii badan.
Waa maxay GOES?
GOES waa soo gaabinta ereyga Dayax-gacmeedka Hawleed ee Geostationary. Dayax gacmeedkan ayaa loo maleynayaa inuu yahay kacaan dhammaan dayax gacmeedyada noocaan ah. Waxaa jira satellites orbit polar iyo kuwo kale oo dayax gacmeed geometationary. Kuwan dambe waa kuwa meertoodu ku soo beegmayso xawaaraha aynu ku soconno wareegga Dunida. Tani waxay ka dhigan tahay inay had iyo jeer ina siiso isla sawirka adduunka. Waxay awood u leedahay inay sii wadato duulimaadkeeda dhibco gaar ah oo ku saabsan meeraheenna. Tan waxaa loo sameeyaa maxaa yeelay ujeedkeeda ugu weyni waa in la siiyo kala duwanaanta saadaasha hawada si loo saadaaliyo isbeddelada la sameynayo.
Moodalka 'GOES-R' ee su'aashu ka taagan tahay tan ugu kacdoonka badan tan iyo cusbooneysiiyaa qalabka iyo awoodda wax qabadka xogta. Waxay awood u leedahay inay ka baaraandegto macluumaadka tiro iyo xawaare aad u badan, sidaa darteed waxay na siinaysaa adeeg tayo iyo hufnaan badan leh. Tani gabi ahaanba waa lagama maarmaan haddii aan dooneyno inaan helno sax marka aan diyaarinayno warbixinnada ku saabsan saadaalinta cimilada iyadoon haysan wax yar oo qalad ah.
Sidoo kale, wuxuu leeyahay xallinta qaab dhismeedka 4 jeer ka badan inta caadiga ah iyo daboolis shan jeer ka dhakhso badan. Khariidaynta waqtiga-dhabta ah ee hillaaca hillaacu waa mid cajiib ah. Tani waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta saadaasha duufaanta waxayna hagaajinaysaa waqtiyada aad uga digi karto sameynta duufaan. Tani waxay ku habboon tahay kuwa wax ka barta duufaannada ama kuwa "ugaarsada duufaannada." Dhinaca kale, waxay kaloo ka caawisaa hagaajinta saadaasha duufaanka iyo xooggeeda suurtagalka ah, xakamaynta wanaagsan ee qulqulka raajada qorraxda, iwm.
Tayo fiican iyo qaladaad saadaalin yar
Waxa lagu gaarayo dayax gacmeedka GOES waa in la helo tayo wanaagsan marka la helayo xogta saadaasha hawada iyo dhinaca hoose ee qaladka. Su’aasha dad badani isweydiiyeen markay gelinayeen orbit waa haddii aan haysan lahayn saadaallo ka gaabiya kuwii hore. Runtii way dhib badan tahay in la ogaado in roob uu da'ayo maalintaas oo kale, la joojiyo qorshooyinka taas aawadeed iyo ugu dambayntii inay tahay maalin qorrax leh oo ka wanaagsan sidii hore. Ama wax iska soo horjeed ah, in aan u baxno cabitaan oo aan si lama filaan ah u dhicin maydhasho xoog leh.
Saadaasha hawada ayaa laga helay moodello ka dhigaya tusaalayaal waxa dhici doona. Si loo fuliyo tusaalayaashan waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado qiyamka isbeddelada saadaasha hawada ee xilligaas iyo u janjeeraha ay u leeyihiin inay wax ka beddelaan qiimayaashan. Taasi waa, haddii heerkulka, cadaadiska jawiga iyo qiimaha dabaysha ay sii socdaan inay is beddelaan sida ay hadda sameynayaan, waxaan saadaalin karnaa sameynta roobab. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in qiimayaashani ay u beddelaan isbeddelladooda kale. Tani waa waxa qaladka marwalba keena.
Moodooyinkaani si wanaagsan ayey u qulqulayaan oo waxay bixinayaan xog sax ah, waxaan u baahannahay xitaa xog dheeri ah si aan ugu galino doorsoomayaasha. Markasta oo xogtani sax tahay, ayaa saadaasha wanaagsan ee dayax gacmeedka GOES uu sameyn karaa. Qalabkeeda, dayax gacmeedku wuxuu wax ku arki karaa waqtiga dhabta ah, guuldarooyin la'aan iyo si isdaba joog ah, dusha sare ee dhulka oo ah 16 guutooyin muuqaal ah Dheeraad ah, Waxaa ku jira kanaalada la arki karo, 4 u dhow kanaallada infrared iyo 10 kanaal infrared dheeraad ah. Awooddaan oo dhan waxay ku siinayaan qol yar oo qaladka ah.
U fiirsashada goobta
Faa'iidada dayax-gacmeedkan kacaanku leeyahay ayaa ah inuusan u fiirsanayn oo keliya Dhulka iyo u kuurgalka saadaasha hawada. Waxay sidoo kale leedahay xafiisyo xiriir ah oo lala yeesho isgaarsiinta shisheeye. Waxay mas'uul ka tahay, tusaale ahaan, ogaanshaha qaababka meelaha sida dabaysha qoraxda. Waxay kaloo falanqaysaa xoogaa shucaac ah oo waxyeelayn kara cirbixiyeennada inaan ka joogno meeraha.
Marka lagu daro qiimeynta khataraha suurtagalka ah ee cirbixiyeennada, macluumaadkan waxaa loo isticmaali karaa in looga digo dhacdooyinka halista ah ee dhici kara. Marka, waxyeelada qaar ee isgaarsiinta waa laga fogaan karaa. Waxay leedahay magnetometer mas'uul ka ah cabbiraadda aagga magnetka iyo firfircoonida ay wataan walxaha dibadda lagu soo oogay.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran doontid dayax gacmeedka GOES, kan ugu wanaagsan ee ilaa hadda jira
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Dayax gacmeed ayuu ku baxayaa